ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ အခြေခံအချက်အလက်များ | နေမင်း ( နည်းပညာ )
February 20, 2011 — naymin99 ကွန်ပျူတာအကြောင်းသိသင့်သိထိုက်သည်များကိုအကြမ်းမျဉ်းအလွယ်တကူဖတ်၇ှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ထား သောပို့ဒ်ထဲတွင်ေ၇းသားထားသောကွန်ပျူတာအမျိုးအစားများသည် အနည်းငယ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သော်လည်းအကြမ်းမျဉ်းသိထားသင့်သောအကြောင်းအ၇ာများဖြစ်သောကြောင့်လေ့လောသင့်သောပို့ဒ်တစ် ခုဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာဖြင့် အိမ်တွင် စာရင်းပြုစုခြင်း၊ စာစီစာရိုက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ E-mail, Internet အသုံးပြုခြင်း၊ ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် Game ကစားခြင်း၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းစသဖြင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအား ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ယခုခေတ်တွက်ကွန်ပျူတာသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ယူရန် စဉ်းစားလာသည့်အခါ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော computer ဆိုင်များ၊ ယုံကြည် အားထားလောက်သော computer company ကြီးများတွင် ၀ယ်ယူကြသလို ကွန်ပျူတာအကြောင်း နားလည် တတ်ကျွမ်းသောသည့် အသိမိတ်ဆွေကို ခေါ်ယူ၍၀ယ်ယူသည် လည်း ရှိပါသည်။မည်သို့ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ ၀ယ်ယူသူကိုယ်တိုင်မှ ကွန်ပျူတာနှင့်ပါတ်သက်သော အခြေခံအချက် အလက်များကို ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီး ၀ယ်ယူတတ်ခြင်းသာလျှင် အကောင်း ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အချိန်ပိုင်းကာလအတွင်း ကွန်ပျူတာအခြေခံအချက်အလက်များအား အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု နားလည်သဘောပေါက်စေသော အရေးအသားများဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။
(1) Processor or Central Processing Unit (CPU) (2) Motherboard (3) Memory (4) Hard Disk (5) Floppy Drive (6) Video Graphic Card (7) Keyboard (8) Mouse & Pad (9) Casing (10) Monitor တို့ ပါဝင်ပါသည်။
(1) Central Processing Unit (CPU)ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ အရေးအကြီးဆုံး အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် CPU အား Motherboard ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရပါသည်။ CPU ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအနက် Intel, AMD တို့မှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ Intel ကုမ္ပဏီထုတ် CPU များမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ ဈေးကွက်အများစုကို ရရှိထားသည်။Intel Company မှ Celeron(R) နှင့် Pentium(R) processor series နှစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ Celeron(R) Processor အမျိုးအစားအား စာစီစာရိုက်ခြင်း၊ e-mail ပို့ခြင်း၊ စာရင်းအင်း software များ အသုံးပြု ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော software များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Pentium(R) Processor အမျိုးအစားမှာ Celeron(R) Processor များထက် ပိုမိုလျင်မြန်ပါသည်။ Pentium(R) Processor အမျိုးအစားများမှာ Game ကစားလိုသူများ၊ Photo Editing Software များ၊ Multimedia ၊ Internet စသည်တို့ကို လျှင်မြန်စွာအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Processor ၏ အမြန်နှုန်းအား Hz (Hertz) ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သော Pentium Processor Speed မှာ 60 MHz မှ ယခုနောက်ဆုံး Pentium4မှာ 3.4GHz အထိ ထွက်ရှိနေပြီးဖြစ်ရာ ယခင် 60 MHz ထက် အဆ (၄၀)ကျော် ပိုမိုမြန်ဆန်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။Processor များတွင် Internal Speed နှင့် External Speed ဟူ၍ (၂)မျိုးရှိပါသည်။ Internal Speed ကိုသာ အဓိကထား ပြောဆိုကြပါသည်။ ဥပမာ အထက်စာပိုဒ်ပါ Pentium4(3.2E GHz) မှာ Internal Speed ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ External Speed မှာ 800 MHz ဖြစ်ပါသည်။ Internal Speed မှာ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင် မှု အမြန်နှုန်းဖြစ်ပြီး၊ External Speed မှာ Processor ထက် နှေးကွေးသော Memory မှ အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ Front Side Bus (FSB) ဟု လူသိများပါသည်။ ဥပမာ- Pentium4(3.2E GHz) ၏ (FSB) မှာ 800 MHz ဖြစ်ပါသည်။Processor များတွင် L2 Cache ဟုခေါ်သော UltraFast Memory အား ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထား ပါသည်။ ယင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ Memory မှ သတင်းအချက်အလက်များအား Processor သို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် Processor မှ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု လျင်မြန်သဖြင့် စောင့်ဆိုင်းမှုမရှိစေရန် ကြားခံယာယီသိုလှောင်ဌာန အဖြစ် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ Processor မှ L2 Cache ကြားခံသိုလှောင်ဌာနမှ သတင်းအချက်အလက်များ ကို ယူဆောင်၍ တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ပါက လျင်မြန်သော Processor နှင့် နှေးကွေးသော Memory အကြား ကွာဟချက်ကို ကျဉ်းမြောင်းသွားစေပါသည်။ဥပမာ-Intel Pentium II CPUsInternal Speed Range : 233 MHz to 450 MHzFront Side Bus : 66 MHz to 100 MHzL2 Cache : 256 KB
Intel Pentium III CPUsInternal Speed Range : 450 MHz to 1.26 GHzFront Side Bus (FSB) : 100 MHz to 133 MHzL2 Cache : 256 KB or 512 KB
Intel Pentium4CPUsInternal Speed Range : 1.3 GHz to 3.40 GHzFSB : 400 MHz, 533 MHz, 800 MHzL2 Cache : 256 KB, 512 KB, 1 MB,2MB
Intel Celeron CPUsInternal Speed Range : 266 MHz to 2.80 GHzFSB : up to 400 MHzL2 Cache : 128 KB, 256 KB
ဥပမာ- Pentium42.4 A GHz သည်FSB : 533 MHz, L2 Cache : 1024 KB (1MB)Pentium42.4 B GHz သည်FSB : 533 MHz, L2 Cache: 512 KB ပါဝင်သဖြင့်* 2.4 A သည် 2.4 B ထက် ပိုမိုလျှင်မြန်ပါသည်။Celeron 2.4 GHz သည်FSB : 400 MHz နှင့် L2 Cache : 128 KB သာ ပါဝင်သဖြင့် Pentium42.4A GHz နှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက Internal Speed တူသော်လည်း FSB နှင့် L2 Cache ပါဝင်မှုအရ လျင်မြန်မှု၊ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှု ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့ကွန်ပျူတာဈေးကွက်တွင် ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးသော Intel Company ထုတ် Pentium4Processor နမူနာအချို့မှာ-– Intel Celeron 1.8 GHz (L2 Cache:128KB, FSB:400MHz, 478)– Intel Celeron 2.26D GHz (L2 Cache:256KB, FSB:533MHz, 478)– Intel Celeron 2.4D GHz (L2 Cache:256, FSB:533MHz, 478)– Intel Celeron 2.53 GHz (L2 Cache:256KB, FSB:533MHz, 478)– Intel P4- 1.6 GHz (L2 Cache:256KB, FSB:400MHz, 478)– Intel P4- 2.4A GHz (L2 Cache:1MB, FSB:533MHz, 478)– Intel P4- 2.4B GHz (L2 Cache:512KB, FSB:533MHz, 478)– Intel P4- 2.8A GHz (L2 Cache: 1MB, FSB:533MHz, 478)– Intel P4- 2.8B GHz (L2 Cache:512KB, FSB:533MHz, 478)– Intel P4- 2.C GHz (L2 Cache:512KB, FSB:800MHz, 478)– Intel P4- 2.8E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz, 478)– Intel P4- 3.0C GHz (L2 Cache:512KB, FSB:800MHz, 478)– Intel P4- 3.0E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz, 478)– Intel P4- 3.2E GHz (L2 Cache:1KB, FSB:800MHz, 478)– Intel P4- 3.0E GHz (L2 Cache: 1MB, FSB:800MHz / LGA775)– Intel P4- 3.2E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz / LGA775)– Intel P4- 3.0F GHz (L2 Cache:2MB, FSB:800MHz / LGA775)– Intel P4- 3.2F GHz (L2 Cache:2MB, FSB:800MHz / LGA775)– Intel P4- 3.4F GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz / LGA775)အထက်ပါ Processor Speed များတွင် 2.8C GHz မှစ၍ Hyper-Threading Technology ဖြင့် ထုတ်လုပ် လာခဲ့ပါသည်။Hyper-Threading Technology သည် Software Application များစွာကို အချိန်တစ်ချိန်တည်းတွင် တပြိုင် နက်တည်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် Memory များစွာလိုအပ်သော Adobe Photoshop ကဲ့သို့သော Photo Editing Software, 3D Animation Software များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အချိန်တို အတွင်း အလုပ်များကို လျှင်မြန်စွာ ပြီးစီးစေပါသည်။ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သော Pentium4Processor မှာ 423 Pin (180 nm Process), ထို့နောက် 478 Pin (130 nm Process) အမျိုးအစားများကိုသာ အဓိကထား ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ LGA 775 (90 nm Process) Pentium4CPU များကို အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါသည်။ Hyper-Threading Technology အား ထပ်မံပြုပြင်၍ Dual Core Technology နည်းပညာသုံး CPU များလည်း ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါသည်။
* Processor သည် Intel ကုမ္ပဏီထုတ်ဖြစ်ပါက Celeron (or) Pentium ?* Processor ၏ အမြန်နှုန်း ?* FSB အမြန်နှုန်း ?* L2 Cache ?* Socket 478 (or) Socket LGA 775 ?* Support Hyper-Threading Technology ?
(2) MotherboardMotherboard သည် ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ရာတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းကြီး ဖြစ်သည်။ Motherboard တွင် ကွန်ပျူတာ (၁)လုံး၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော Processor CPU, Memory, Graphic Card, Sound Card, Hard Disk နှင့် အခြား CD-Rom အစရှိသဖြင့် Drive များ၊ Network ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပူးတွဲပြီး တပ်ဆင်ရာ ဘုတ်ပြားကြီး ဖြစ်ပါသည်။ကွန်ပျူတာဝယ်ယူရာတွင် Motherboard ရွေးချယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ 3D Graphic Card များ တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ Motherboard တွင် On Board အဖြစ် တပေါင်းတည်း တပ်ဆင်ပေးလိုက်သော Motherboard များမှာ သုံးစွဲလိုသူ၏ ဆန္ဒအလျောက် Memory သီးသန့်ပါဝင်သော Graphic Card ကဒ်များကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။VGA On Board များမှာ Total System Memory မှ မျှဝေသုံးစွဲသဖြင့် အမှန်တကယ်သုံးစွဲနိုင်သော Memory မှာ လျော့နည်းလေ့ရှိသည်။ Mother တွင် ပါဝင်သော Chipset သည် Intel Chipset လား၊ VIA Chipset လား ပေါ်မူတည်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်သည်။ Chipset Series ဥပမာ- Intel 845, Intel 848, Intel 865, Intel 875, Intel 925X အစရှိသဖြင့် Model မြင့်ရင်မြင့်သလို၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်မှု အနည်း အများပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားသည်။မြန်မာ့ကွန်ပျူတာဈေးကွက်တွင် အသုံးများသော Motherboard အချို့မှာ-– P4- Axper VIA266A (478/DDR) w/Sound + VGA + LAN– P4- GIGA 8VM 533M-RZ-RZ (478/DDR) w/Sound + VGA + LAN– P4- GIGA 8S648-FXP-RZ (478/DDR/HT) w/Sound + Sound + LAN– P4- GIGA 8S648-FX775 (775/DDR/HT) w/Sound + LAN– P4- MSI Intel 848P Neo-V (478/DDR/HT) w/Sound + LAN– P4- GIGA 81PE775-G (775/DDR/HT) w/Sound + LAN– P4- Intel 865 PERL (478/DDR/HT) w/Soundသုံးစွဲလိုသူမှ ကုမ္ပဏီအချို့ဖြစ်သည့် Gigabyte, Albatron, ABIT, MSI, Intel ကုမ္ပဏီထုတ် Motherboard များမှ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်သလို၊ တပ်ဆင်မည့် CPU နှင့်လိုက်ဖက်မည့် Motherboard ရွေးချယ်တတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Pentium နှင့် Celeron CPU များအတွက် ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံး On Board (VGA) Motherboard များ ရွေးချယ်နိုင်သလို ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သော Intel ကုမ္ပဏီထုတ် Motherboard တွင်လည်း တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ကွန်ပျူတာဝယ်ယူသည့်အခါ ငွေကြေးကြောင့် ဈေးနည်းသော Motherboard, Memory နည်းနည်းနှင့် ၀ယ်ယူခဲ့သော်လည်း နောင်အနာဂါတ်တွင် CPU အား အဆင့်မြှင့်တင်လိုသည့်အခါ Motherboard မှ အသစ် ထပ်မံတပ်ဆင်လိုသော CPU အား လက်မခံနိုင်ခြင်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် CPU အပြင်၊ Motherboard အသစ်ပါ ထပ်မံဝယ်ယူတပ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Motherboard Manual စာအုပ်တွင် မည်သည့် CPU အထိ တပ်ဆင်နိုင်သည်ကို ရေးသားထားလေ့ရှိရာ လေ့လာထားသင့်သော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Manual အား နားမလည်ပါက ကျွမ်းကျင်သူ Computer Technician အား မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ Motherboard တပ်ဆင်ထားမှုအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အထူးသတိထားသင့်သော အချက်ဖြစ်သည်။ CPU, Motherboard, Memory, Graphic Card အချိုးညီမျှတစွာ တပ်ဆင်မှုသည် အရေးကြီးလှပါသည်။
* VGA On Board အမျိုးအစား ?* On Board ဖြစ်ပါက စာစီစာရိုက်၊ ရုံးသုံးအတွက်သာသင့်တော်ပါသည်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်ပါက Graphic Card သီးခြား တပ်ဆင်ရသော Motherboard သာ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။* Chipset Model က VIA, SIS, Intel ?Intel Chipset တပ်ဆင်ထားသော Motherboard က ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ Chipset Model – SIS848, Intel 865, Intel 915 စသဖြင့် သိသင့်ပါသည်။* မည်သည့် Processor Model အထိ တပ်ဆင်နိုင်ပါသလဲ ? Motherboard Manual စာအုပ်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရာ ရောင်းချသည့် Computer Sales Center ကို မေးမြန်းသင့်ပါသည်။* Memory တပ်ဆင်မည့် Motherboard သည် Dual Channel Support လုပ်ပါသလား ?* မည်သည့် CPU Socket အမျိုးအစားတပ်ဆင်နိုင်သနည်း။ ဥပမာ- Socket 478 (or) Socket LGA 775Socket LGA 775 CPU တပ်ဆင်မည်ဆိုပါက Motherboard ရွေးချယ်သည့်အခါ DDR400 Memory တပ်ဆင်နိုင်သော Motherboard များရှိသလို DDR2 533/667 Memory သာ တပ်ဆင်နိုင်သော Motherboard များလည်းရှိပါသည်။ AGP 8x Graphic Card တပ်ဆင်နိုင်သော Socket 775 Motherboard များရှိသလို PCI Express 16X Graphic Card သာ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သော Motherboard များလည်းရှိသဖြင့် Socket 775 Motherboard ၀ယ်ယူပါက မည်သည့် Memory အမျိုး အစား (DDR 400 (or) DDR2 533/667) တပ်ဆင်နိုင်သည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ မည်သည့် Graphic Card (AGP or PCI Express) တပ်ဆင်နိုင်သည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Socket LGA 775 Pentium4CPU နှင့် Socket LGA 775 Motherboard ကို ရွေးချယ်ထားသော်လည်း AGP 8x Graphic Card နှင့် သာမန် DDR 400 Memory တပ်ဆင်အသုံး ပြုနိုင်ခြင်းသည် DDR2 Memory နှင့် PCI Express Graphic Card တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမည် ဖြစ်သော်လည်း နောင်အနာဂါတ်တွင် DDR2 Memory နှင့် PCI Express Graphic Card များသာ ပိုမိုခေတ်စားလာမည် ဖြစ်သဖြင့် ချင့်ချိန်ကာ ၀ယ်ယူသင့်ပါသည်။
MemoryMemory သည် Computer ၏ ယာယီမှတ်ဥာဏ် ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာမီးပိတ်လိုက်ပါက မှတ်ဥာဏ်အတွင်းရှိ အချက် အလက်များ ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Random Access Memory (RAM) ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ Memory ပမာဏ အား B(Byte) ဖြင့်တိုင်းတာပြီး၊ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အမြန်နှုန်းအား MHz ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ Pentium II, III Computer များအတွက် SD RAM အမျိုးအစားကို သုံးကြပါသည်။ SD RAM တွင် PC 100 နှင့် PC 133 ကို Standard အဖြစ် အသုံးများသည်။ PC 100 အမျိုးအစား Memory သည် 100 MHz အမြန်နှုန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး PC 133 အမျိုးအစား Memory သည် 133 MHz အမြန်နှုန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။Pentium4ကွန်ပျူတာများသည် DDR SD RAM (DDR=Double Data Rate) ကို သုံးကြပါသည်။ DDR RAM များသည် SD RAM များ၏ အမြန်နှုန်းနှစ်ဆဖြင့် Data များကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ DDR SDRAM များသည် 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz များဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး 200 MHz အား (PC 1600), 266 MHz အား (PC 2100), 333 MHz အား (PC 2700), 400 MHz အား (PC 3200) အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ယခုအခါ 533 MHz အမြန်နှုန်းရှိသော DDRII Memory များလည်း ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ အသုံးများသော Memory ပမာဏများမှာ 128 MB နှစ်ချောင်းတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် 256 MB ရရှိနိုင်သလို၊ 256 MB တစ်ချောင်းတည်း တပ်ဆင် ခြင်းဖြင့်လည်း ရနိုင်ပါသည်။Memory ပမာဏများလေ Memory ကို အဓိကထား သုံးစွဲရသော Adobe Photoshop လို Software များ သုံးစွဲသည့် အခါတွင်လည်းကောင်း၊ 3D Game များ ကစားသည့်အခါတွင် လည်းကောင်း၊ ပိုမိုလျင်မြန်မှု၊ မြန်ဆန်မှုကို ရရှိစေပါသည်။Memory ပမာဏအား စာစီစာရိုက်အတွက် 128 MB အနည်းဆုံးရှိသင့်ပြီး၊ Game များ ကစားလိုပါက 256 MB, 512 MB ရှိသင့်ပါသည်။ 3D Graphic Card များ တွင်ပါဝင်သော Memory ပမာဏနှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ AGP (Accelerated Graphic Port) တွင် တပ်ဆင်ကြသော Graphic Card များတွင် ပါဝင်သော Memory ပမာဏမှာ 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB ဟူ၍ အမျိုးအစားများရှိရာ ယင်းတို့သည် 3D ရုပ်ပုံများ၊ Game အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Computer ၏ အဓိက Memory လည်း များများတပ်ဆင်ပြီး၊ Graphic Card ကိုလည်း အမြင့်ဆုံးတပ်ဆင်ပါက စွမ်းဆောင်ရည်သည် အတိုင်း ထက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြည့်ဝစွာ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
* Memory အမျိုးအစား ?* Kingston ကုမ္ပဏီထုတ် Memory များက ပိုကောင်းပါသည်။* Memory Speed ?DDR 333 MHz, DDR 400 MHz, DDRII 533 MHz* မည်သည့်ပမာဏအထိ Memory တပ်ဆင်နိုင်ပါသလဲ ?Hard DiskHard Disk သည် Primary Storage Area ဖြစ်ပါသည်။ Memory ကဲ့သို့ မီးပိတ်လိုက်ပါက Data များ ပျောက်ဆုံး သွားခြင်း မရှိပါ။ Program များကို Hard Disk တွင် ထည့်သွင်းရပါသည်။ သတင်းအချက် အလက်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။Hard Disk တစ်လုံးသည် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်မျှသိမ်းဆည်းထားနိုင်သလဲဆိုတာကို Byte ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ ၀င်ဆန့်တဲ့ ပမာဏအလိုက် 850 MB, 1.2 GB, 4.3 GB, 8.4 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB, 200 GB, 250 GB, 320 GB, … စသဖြင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ယနေ့ Pentium4ကွန်ပျူတာများတွင် 40 GB, 80 GB Hard Disk Size များ ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသည်နှင့် အမျှ သုံးစွဲနိုင်သူဦးရေ များပြားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ Seagate Company ထုတ် Hard Disk မှာ လူကြိုက်များ သည်။ Hard Disk တစ်ခုကို ဖော်ပြရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Company နာမည်ကိုပါ ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ နမူနာပြအချို့မှာ-40 GB (Maxtor) 7200 rpm, IDE40 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE40 GB (Samsung) 7200 rpm, IDE80 GB (Maxtor/ Hitachi) 7200 rpm, IDE80 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE80 GB (Seagate) 7200 rpm, SATA12 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE12 GB (Seagate) 7200 rpm, SATAအထက်ဖော်ပြချက်တွင် Maxtor, Seagate, Samsung မှာ သက်ဆိုင်ရာ Hard Disk ထုတ်လုပ်သည့် Company များ၏ အမည်ဖြစ်သည်။ 7200 rpm မှာ Hard Disk ၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းဖြစ်ပြီး IDE မှာ Integrated Electronics (IDE) အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး SATA မှာ Serial ATA ဖြစ်ပါသည်။ SATA အမျိုးအစား Hard Disk မှာ IDE အမျိုးအစား Hard Disk ထက် Data များကို ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ထုတ်လုပ်သော Company အမည်ကိုလိုက်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။ Hard Disk ရွေးချယ်သည့်အခါ 40 GB, 80 GB အနည်းဆုံးတပ်ဆင်သင့်ပါသည်။
* Hard Disk ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ?(Maxtor, Hitachi, Samsung, Seagate)Seagate ကုမ္ပဏီထုတ် Hard Disk များမှာ ပိုမိုလူကြိုက်များသည်။
Floppy DriveFloppy Drive တွင် 3.5″ ရှိ Floppy Disk ကို ထည့်သွင်းပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို ကူးယူနိုင် ပါသည်။ Floppy Disk သည် 1.44 MB သာ လက်ခံသည်။ Floppy Disk ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ Data တွေကို အခြားတစ်လုံးသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ Data ၀င်ဆန့်နိုင်မှု ပမာဏသည် စာသားအနည်းအများ၊ ရုပ်ပုံ ပါဝင်မှုပေါ် မူတည်ပါသည်။ File Size သည် 1.44 MB အထိသာ သိမ်းဆည်းနိုင်သဖြင့် အလွန်များပြားသော စာမျက်နှာများ၊ ရုပ်ပုံများ သိမ်းဆည်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
Video Graphic Cardယခုအခါ Graphic Card များတွင် AGP (or) PCI Express အမျိုးအစား Graphic Card များကိုသာ သုံးစွဲ နေကြပါသည်။ 3D Graphic Controller Card ဟူ၍လည်း သိနားလည်ကြပါသည်။ AGP သည် (Accelerated Graphic Port) ဖြစ်ပါသည်။ PCI Express သည် နောက်ဆုံးပေါ် Graphic Card ဖြစ်ပါသည်။ 3D ရုပ်ပုံထွက် များကောင်းမွန်ရေးသည် အဓိကကျလှသော နောက်ဆုံးပေါ် Computer Graphic Game များ ကစားရာ နိုင်နင်း စွာ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ပုံရိပ်များကို ချောမွေ့ကြည်လင်ပြတ်သားစေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်း နိုင်ပါသည်။ AGP Card များ မထွက်ပေါ်သေးမီက ရိုးရိုးသာမန်ရုပ်ပုံထွက် VGA Card (PCI) အမျိုးအစားများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း Card များအား ယခုနောက်ဆုံးပေါ် Computer များတွင် အသုံးပြုခြင်း မရှိတော့ပါ။AGP Card များတွင် Memory သီးသန့်ပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB အထိ ပါဝင်သော AGP Card အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ AGP Card များ၏ Data သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်မှု အမြန်နှုန်းအား 1x, 2x, 4x, 8x စသဖြင့် ပြောဆိုကြပါသည်။ဥပမာ- 32 MB SDR DRAM ပါဝင်သော AGP Card သည် 4x=1.07 g bps (giga byte per second) အမြန် နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ 64 MB DDR RAM ပါဝင်သော AGP Card သည် 8x=2.1 g bps အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်း ကောင်း Data များကို သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ AGP 4x Card များထက် AGP 8x Card သည် Data များအား သယ်ယူရာတွင် ၂ ဆခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်လှပါသည်။ထို့ကြောင့် AGP Card တစ်ခုသည် 4x ? , 8x ? , သိသင့်ပါသည်။ AGP 8x Card ကို AGP 4x သာ လက်ခံ နိုင်သော Motherboard တွင် တပ်ဆင်ပါက AGP 8x အမြန်နှုန်း ရရှိမည်မဟုတ်ပေ။ယခုအခါ New Technology PCI Express Card များ ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ PCI Express 16x Graphic Card များသည် 8 gbps အမြန်နှုန်းဖြင့် Data များကို သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သဖြင့် AGP 8x Graphic Card များထက် ပိုမိုလျင်မြန်ပေလိမ့်မည်။Theory အရ နှေးသောအရာနှင့် မြန်သောအရာပူးတွဲတပ်ဆင်ပါက နှေးသောအမြန်နှုန်းဖြင့်သာ အလုပ်လုပ် မည်ဖြစ်သဖြင့် Motherboard ရွေးချယ်သည့်အခါ အထူးသတိထားသင့်ပါသည်။64 MB AGP (MX 440, 8X) with TV Out64 MB AGP (MX 4000, 8X) with TV Outစသည်ဖြင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိနိုင်ရာ ကွန်ပျူတာ ၀ယ်ယူရာတွင် မည်သည့် အမျိုးအစားဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်ကို လေ့လာနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါသည်။
* Graphic Card ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ?(Albatron, Gigabyte, MSI, ASUS)Gigabyte, MSI, ASUS Graphic Card များက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။* AGP Graphic Card (or) PCI Express Graphic Card* Memory ပမာဏ (64MB, 128MB, 256MB)* Data Transfer Speed 4x or 8x or 16x ?
Keyboard သည် သတင်းအချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာသို့ထည့်သွင်းရာ Input Device တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ PS/2 Keyboard တစ်ခု၏ ကြိုးခေါင်းမှာ ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး Computer Casing ၏ အနောက်ဖက်၊ Motherboard ရှိ ခရမ်းရောင်အပေါက်တွင် တပ်ဆင်ရပါမည်။Keyboard များတွင် ဈေးနှုန်းအရ 2500 Ks မှ Wireless Keyboard သောင်းကျော်အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ Function စုံလင်မှုအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။
Mouse သည် သတင်းအချက်အလက်များကို Computer သို့ ထည့်သွင်းရာ Input Device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင် Keyboard နှင့် Mouse သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှပါသည်။ Mouse တွင် Serial Mouse, PS/2 Mouse, USB Mouse, Optical Mouse, Wireless Mouse စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိသည်။PS/2 Mouse တစ်ခု၏ ကြိုးခေါင်းမှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး Computer Casing ၏ အနောက်ဖက်၊ Mother board ရှိ အစိမ်းရောင်အပေါက်တွင် တပ်ဆင်ရပါမည်။Serial Mouse များမှာ နှေးကွေးပြီး PS/2 Mouse များကိုသာ အသုံးများသည်။ Optical Mouse များသည် PS/2 Mouse ကဲ့သို့ ရွေ့လျားရာတွင် Wheel ကို မသုံးဘဲ Sensor ဖြင့်သုံးသဖြင့် ချေးမတက်ခြင်း၊ ရေရှည်ခိုင်ခံ့ ခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုလူကြိုက်များသည်။
၀ယ်ယူလိုအား ရွေးချယ်စေလိုသည့်အချက်Optical Mouse ရွေးချယ်သည့်အခါ Samsung ကုမ္ပဏီထုတ် Optical Mouse များမှာ လူကြိုက်များသည်။
Casing Casing သည် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများဖြစ်သော Motherboard, Hard Disk, Floppy Drive, CD-ROM Drive စသဖြင့် Computer ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းတွင် ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုလုံးအား လိုအပ်သော လျှပ်စစ်များ ပေးပို့ရာဖြစ်သော Power Supply တပ်ဆင်ရာလည်း ဖြစ်သည်။ စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားပြီး သုံးစွဲနိုင်သဖြင့် Desktop Casing ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ Casing တွင်-(1) Normal Casing(2) Normal Light Casing(3) Light (အလှမီး) Casing(4) Light + Second Fan Casing ဟူ၍ အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။မိမိ Computer အတွက် Casing ကို အရောင်၊ ပုံသဏ္ဍာန်ကအစ မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရသည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Model အနိမ့်အမြင့်၊ Casing Design ပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။Casing ၀ယ်ယူရာတွင် Casing နှင့်အတူ တွဲဘက်ပါရှိလာသည့်အရာမှာ Power Supply ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း Power Supply သည် 350W, 400W, 450W လား မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ Watt များပါက နောင်အနာဂါတ်တွင် ထပ်မံတပ်ဆင်လိုသည့် Computer ပစ္စည်းများကို နိုင်နင်းစွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
၀ယ်ယူလိုသူမှ မေးမြန်းသင့်သည့်အချက်* Casing တွင်ပါဝင်သော Power Supply သည် အာမခံသက်တမ်းကာလ ၆ လ (သို့) ၁ နှစ်ပေးပါသလား?
Monitor သည် Computer ၏ Output Device တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ယူရာတွင်လည်းကောင်း၊ Monitor မှ သတင်းအချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုဆုံး ဖြတ်နိုင်သည်။ Hard Disk ထုတ်ယူလိုပါက Printer မှ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။Monitor အမျိုးအစားများမှာ 15″, 17″, 19″, 21″ CRT (Cathode Ray Tube) သုံး Monitor များမှာ လူသုံးများ သည်။ ယခုအချိန်တွင်တော့ LCD များကိုသာအသုံးများနေပြီဖြစ်ပါသည်။
« G-Mail အကောင့်ကိုအလွယ်ဆုံး Hack ကြမယ်နော်…..
G-mail ထဲကိုမလိုချင်တဲ့မေးတွေမေ၇ာက်အောင်တားဆီးမယ်… »